Toerana voajanahary 7 any Eropa tsy tokony hotadiavina | Vaovao momba ny dia
Tsy ilaina ny mankany amin'ny faran'izao tontolo izao mankafy ny toerana voajanahary amin'ny hatsaran-tarehy tsy mampino. Any Eropa dia manana toerana voajanahary maro isika izay mendrika hitsidika ary azontsika antoka fa miresaka fohy momba azy ireo isika. Araho tsara ireo toerana voajanahary ireo izay misy hatsarana mahafinaritra izay tsy azonao adino.
Hiresaka momba izany isika toerana fito fenomenal eo afovoan'ny natiora azontsika jerena any Eropa. Fantatray fa misy maro hafa, fa amin'ny lisitra iray dia tsy maintsy mametra ny tenanao foana ianao. Ankoatr'izay, raha manao lisitra amin'ny zavatra rehetra tiana hojerena isika dia azo antoka fa haharitra ela izany. Mihaino ireo toerana ireo izay toa nofinofy.
1 Ireo morontsiraka paradisa any Gresy
2 Ny vongan-dranomasin'i Islandy
3 Ny farihin'i Kroasia
4 Ireo volkano ao amin'ny nosy Canary
5 Tany efitra any amin'ny Saikinosy Iberia
6 Ny morontsiraka Algarve
7 Jiro avaratra any Norvezy
Ireo morontsiraka paradisa any Gresy
Saika tsy azo atao ny manapa-kevitra amin'ny vitsivitsy, ary manasa anao hijanona ny faritra rehetra sy ny morontsirak'i Gresy. Amin'ny ankapobeny, ny morontsirak'i Mediteraneana dia feno toerana nofinofy mety amin'ny fialan-tsasatra. Misy torapasika am-boalohany toa Xi any Kefalonia, miaraka amin'ny loko mena ao amin'ny fasika misy azy, ary ny hafa miafina amin'ny toerana tena tsara, toa an'i Seychelles ao amin'ny nosy Ikaria. Elafonisi Beach any Crete dia iray amin'ireo malaza indrindra, tranokala voajanahary miorina ao amin'ny National Park.
Ny vongan-dranomasin'i Islandy
I Islandy dia fantatra amin'ny tanin'ny afo sy ny ranomandry noho ny volkano sy ny glaciers. Raha tsy misy fisalasalana dia ho afaka mankafy ny natiora izaitsizy sy mahavariana indrindra eto amin'ity toerana ity isika. Misy glacier isan-karazany azo tsidihina ao amin'ny nosy, avy amin'ny toerana malaza toa an'i Reykjavik. Mazava ho azy fa tsy ho an'ny olon-drehetra ny fitsangatsanganana glacier satria vita amin'ny torolàlana sy fitaovana fiakarana izy ireo, saingy azo antoka fa ho traikefa tsy manam-paharoa sy hafa izany.
Ny farihin'i Kroasia
Rehefa miresaka farihy any Kroasia isika rehetra dia mieritreritra azy Plitvice Lakes Nature Park. Ireo farihy ireo dia Reserve Reserve voajanahary UNESCO ary iray amin'ireo toerana izay atolotra anao foana satria mahavariana fotsiny. Any amin'ny faritra Lika izy ireo ary manana lalana valo samy hafa izay mandany fotoana samihafa arakaraka ny fotoana laninay handaniana azy. Misy farihy 16 isan-karazany izy io, ary misy riandrano ny sasany, eo afovoan'ny zava-maniry maitso.
Ireo volkano ao amin'ny nosy Canary
Ny Nosy Canary dia nosy volkanika ary noho izany dia afaka mitsidika volkano malaza sasany isika. Ilay Teide tsy isalasalana fa io no malaza indrindra amin'ny rehetra. Azontsika atao ny miakatra amin'ny alàlan'ny fiara tariby mankany amin'ny fomba fijery, ary tsy maintsy hitondra zavatra mafana isika, satria eo an-tampony misy oram-panala saika mandavantaona. Mba hahatongavana any amin'ny farany ambony dia tsy maintsy mangataka fahazoan-dàlana ianao ary tsara ny mitafy kiraro sahaza ny tany. Ny iray hafa tena malaza dia ny Timanfaya any Lanzarote, ny farany nipoaka tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Tany efitra any amin'ny Saikinosy Iberia
Misy efitra roa tsy maintsy resahina ao amin'ny Saikinosy Iberia. Amin'ny lafiny iray ananantsika ny an'i Monegros ary ny iray hafa an'i Tabernas. Ny voalohany dia miorina ao amin'ny lohasaha Ebro ary fantatra manerantany amin'ny festival mozika elektronika izay atao any. Androany dia miady izy ireo mba ho lasa toerana voaaro, satria ity festival izay atao isan-taona ity dia manimba tanteraka ny tontolo iainana ary koa ny lalana ary na ny AVE aza dia mamakivaky azy. Mikasika ny tany efitra Tabernas dia azo antoka fa tonga ao an-tsaina ny sarimihetsika koboy taloha, satria maro no voatifitra tao. Any avaratry ny tanànan'i Almería io, ary heverina ho ny tany efitra irery any Eropa.
Ny morontsiraka Algarve
Any amin'ny atsimon'ny Portugal, ny morontsirak'i Algarve dia tsy tokony hialona ireo sarin'ny Apôstôly Roambinifolo eny amin'ny morontsirak'i Aostralia. Izy io dia manana morontsiraka mahatalanjona sy famolavolana vatolampy capricious, miendrika ny herin'ny ranomasina sy ny fikaohon-tany. Amin'izao fotoana izao dia nanjary toerana fizahan-tany be dia be izy io, izay ahafahanao mitsidika ny morontsiraka manana hatsarana tsara. Aza adino mitsidika ny torapasika Benagil, izay zohy tokoa ary misy lohataona eo an-tampony izay idiran'ny tara-masoandro, noforonin'ny fihanaky ny ranomasina.
Jiro avaratra any Norvezy
Ny Jiro Avaratra dia tranga voajanahary izay tokony ho hitan'ny tsirairay, fara fahakeliny, indray mandeha amin'ny fiainany. Mazava ho azy, zavatra tsy mampino izany, ary any amin'ny tanàna avaratra indrindra no misy izany. Any Eropa dia miresaka momba an'i Tromso, any Norvezy izahay, izay toerana malaza be hahitana azy ireo, fa ny tena marina dia misy ireo mandeha any Failandy, Suède na Islandy handinika ireo jiro fanta-daza tsara eny amin'ny lanitra ireo. ny tanàna tromso Any avaratry Norvezy izy io ary toerana tsara hankafizana ireo jiro avaratra sy ny fiainana mahazatra ny olony amin'ny toerana lavitra avaratra. Ary tsy tokony halahelo ny dia amin'ny alàlan'ny fjords isika, fampisehoana mahafinaritra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Toerana voajanahary 7 any Eropa tsy tokony hotadidina